Oromiyaa: Oduu Injifannoot!! Dhiigni Wallootti jige gumaan isaa Wallaggaa Keessatti ba'ee jira! Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromiyaa: Oduu Injifannoot!! Dhiigni Wallootti jige gumaan isaa Wallaggaa Keessatti ba’ee jira!
#Oduu_Injifannoot!! Dhiigni Wallootti jige gumaan isaa Wallaggaa Keessatti ba’ee jira!
Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo WBOn guyyaa har’aa October 20,2019
Godina Wallagga lixaa #Aanaa_Laaloo_Assaabii magaalaa:#Wanjoo bakka Addaa #Mishilii jedhamtutti 3F lama (2) guutumaa guutuutti daaraa godheera!
Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo gara Wallootiis Sochoo’eera! Walloof Dirmachuun Dirqama Oromummaati Baga Gammaddan! Nafxanyaa fi OPDOn Addaggeedha! Addaggeen Safuu hin beektu addarra dhaabban malee!
WBO Mirgaan Gali jadhamee Oromoo? Yaada keessan nu qoodaa! Gara walloo haa Socho’uu WBOn Qorichi Nafxanyaa? Injifannoo kan ummata Oromooti #Share
የቅማንት እልቅት እንደ ቀጠለ ነው አማራ አሸባሪ ነው ስንል በምክንያት ነው 😢😢ፍትህ ለቅማንት share share
Saree Miniilikiin baasaa nurraa..🐕🐕🐕
~ invader, genocider, slave owner, slave trader, ‘investor’*…
Never forget, nor forgive until there’s some show of repentance from your enemy…
“መደመር ሲባል የትናንትናውን ስህተቶች ማረም ነው” ያለው ጠሚ የዚህን ጨፍጫፊ ግለሰብ ሃውልት ከማፍረስና ስህተቱን ከማረም ይልቅ ቤቱን ሲያድስ፣ ግለሰቡንና ስርዓቱን ሲያደንቅ ይታያል። ወይ መደመር…